Olan’ny famatsiana eto Iarivo :: Miverina indray ny fitarainana momba ny tsy fahampian-drano • AoRaha
Olan’ny famatsiana eto Iarivo Miverina indray ny fitarainana momba ny tsy fahampian-drano
Velon-taraina ireo mpo­nina eny Faravohitra ka nanao antso fanairana, omaly. Ny fahatapahan-drano maharitra no voalaza fa mampitroatra indray ireto mponina eny an-toerana ireto. Nitondra sora-baventy izy ireo naneho ny fahatezerany.
“ Tapaka matetika ny rano ety ambony ety. Amin’ny alina manomboka amin’ny folo hatramin’ny roa ambin’ny folo ora ihany no mandeha izany ka tapaka rehefa amin’ ny enina sy sasany maraina”, hoy Rafidison Alex, mpiasa eny Faravohitra, nanampy an’ireo mponina teny an-toe­rana, omaly. Notsindriany fa nahitana olana amin’ny fama­tsian-drano ihany koa any amin’ny faritra hafa toy ny any Mandroseza. “ Tokantrano dimampolo mahery izahay no tsy maintsy mifoha amin’ny alina mameno rano”, hoy ny fanampim-panazavany.
Nanome fe-potoana ny Jirama izy ireo mba hamahana ny olany. “ Hiditra amin’ ny fitokonana indray izahay aorian’ny roa amby fitopolo ora izany hoe amin’ny zoma ho avy izao raha tsy misy ny fandraisana andraikitra. Takianay ny handehanan’ny rano efatra amby roapolo ora ao ana­tin’ny iray andro”, hoy ny hatrany Rafidison Alex.
Nanamafy ny loharanom-baovao iray avy ao amin’ ny Jirama manoloana an’io tranga io fa “ tafiditra ao ana­tin’ireo faritra dimy manana olana amin’ny famatsian-drano ny eny Faravohitra. Etsy andanin’izay anefa, efa miharitra ny rano any amin’ ny renirano amin’izao foto­ana izao”. Nampiany ihany koa fa “ tsy mipetra-potsiny manoloana ny zava-misy ny Jirama fa miezaka mitady
vahaolana ho an’ny rehetra, toy ny fananganana ny toby famatsian-drano eny Amoronankona sy ny fametrahana rano amin’ny “citerne””.
Fanadinana bakalorea fihodinana faharoa :: Mpampianatra hafa no hamolavola ireo laza adina vaovao
Hosoka amin’ny fanjifana :: Tratra tsikelikely ireo mpangalatra herinaratra vokarin’ny orinasa Jirama